फिचर - 761खबर.com
फिचर ( संघीय संस्करण )
कर्मचारीमा पनि कोरोनाको मनोवैज्ञानिक असर देखिन थाल्यो दक्षिण कोरियामा कसरी रोकियो कोरोना ? आत्मबल कसरी बढाउने ? घरमा बुढा आमाबुवा छन्रु झन् बढी होसियार हुनुस् सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ, संकटग्रस्त अर्थतन्त्र
साउन २६, काठमाडौं - उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अरु सेवा बन्द गरिएसँगै यसको प्रभाव सेवाग्राही र अन्य सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुमा आइतबार मनोवैज्ञानिक रुपमा परेको देखियो । उपत्यकामा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपछि आइतबारदेखि उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवाहरु बन्द गरेको हो ।
११ चैत, काठमाडौं - दक्षिण कोरिया एकैपटक सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस फैलिएका दुई मुलुकमध्येको एक हो । चीनपछि दक्षिण कोरियामा यो भाइरसको प्रकोप फौलिएको थियो ।
‘सामान्य जानकारीबाहेक कोरोनासम्बन्धी समाचारलाई बेवास्ता गरौं । व्यायाम गरौं, शरीरलाई सक्रिय राखौं ।
घरमा बुढा आमाबुवा छन्रु झन् बढी होसियार हुनुस्
झन्डै पाँच वर्षदेखि बुढापाकाको उपचार गर्दै आएका विशेषज्ञ (जेरियाट्रिसियन) डा.रमेश कँडेललाई शुक्रबार पहिलोपटक स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले बोलायो । कारण थियो, कोरोना भाइरसको भय ।
देशले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेको दाबी गर्नेहरु आममान्छेका सुखदुस्खमा सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले के सहजता थप्यो भन्ने हेर्दैनन्  । चैत्र ४ - मिर्गौला प्रत्यारोपणअघि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई दोहोर्‍याए  ।
रित्तिँदै पहाड, तराईमा चाप - बसाइँ सर्नेको संख्या दिनदिनै वढ्दै
चैत ०३,विराटनगर- संखुवासभा खाँदबारीका वीरेश राई व्यवस्थित बासका लागि सपरिवार मोरङको सुन्दरपुर झरे । पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर तराई झर्ने उनी एक्ला होइनन्, कानुनी रीत पुर्‍यएर बसाइँ सर्नेको संख्या दिनदिनै बढेको छ ।
कोही किन भ्रष्ट हुन्छ  ?
फाल्गुन ९, काठमाडौँ — बेलायती इतिहासविद्, लेखक तथा राजनीतिज्ञ जोन एक्टनको प्रसिद्ध कथन छ, ‘शक्ति (सत्ता) भ्रष्ट हुन्छ, पूर्ण शक्तिले पूर्ण भ्रष्टाचार गर्छ  । ’ यहाँ एक्टनले भनेको शक्ति सत्ता वा पदको हो  ।
लघुवित्तले लघुउद्यमी पीडामा : सहरमा गाडी र जग्गा किन्नेलाई भन्दा गाउँमा तरकारी लगाउनेलाई चर्को ब्याज
चर्को ब्याज र किस्ताको तनावले विपन्न परिवारमा आत्महत्याको शृंखला ऋण लिएर उपचार गर्दा पनि बाबु बाँचेनन्, लघुवित्तको तनाव सहन नसकेर १८ वर्षीय छोराको आत्महत्या फाल्गुण ६, बिरामी श्रीमान् राजो दासलाई बचाउन सिराहा नगरपालिका–२ की सनेचरी दासले लघुवित्तबाट ऋण लिइन्  । श्रीमान् बचाउन सकिनन्  ।
सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र भूमिकामा बहस खुला :
फाल्गुन ४, ‘तपाईंहरू पनि अलिअलि बढ्ता भएकै हो । बढ्ता हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने लडेर डेमोक्रेसी ल्याइएको छ, लडेर स्वतन्त्रता ल्याइएको छ ।